I-Taliban: Ngabantu bamanye amazwe kuphela abanokushiya i-Afghanistan kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » I-Taliban: Ngabantu bamanye amazwe kuphela abanokushiya i-Afghanistan kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Isithethi seTaliban uZabiullah Mujahid
I-Taliban inyanzelisa ukuba amagunya asentshona ayeke ukuphuma kwabafundi abafundileyo base-Afghanistan, njengoogqirha neenjineli.
I-Taliban ayizukuvumela ama-Afghans ukuba ahambe nge-Kabul airport.
I-Taliban iyabatyhafisa abantu base-Afghanistan ukuba bangabaleki ilizwe.
UTaliban uthi bonke abantu bamanye amazwe mabahambe e-Afghanistan nge-31 ka-Agasti.
Isithethi seTaliban uZabiullah Mujahid ubhengeze namhlanje ukuba iqela lamajoni amaSilamsi alisayi kuvumela abantu baseAfghan ukuba bangene kwisikhululo senqwelomoya saseKabul Hamid Karzai ngelizama ukushiya iAfghanistan.
Ukuthetha ngolwesiBini emva kwemini, isithethi seTaliban sithe iTaliban ayisayi kubavumela abantu base-Afghans ukuba balishiye ilizwe Isikhululo senqwelomoya saseKabul kwaye wabiza abaseNtshona ukuba bangakhuthazi abantu abafundileyo ukuba babaleke. Isithethi sanyanzelisa ukuba amagunya asentshona ayeke ukukhupha abagqwesileyo abafundileyo baseAfghanistan, abafana noogqirha neenjineli.
U-Mujahid uthe iinkokheli zeTaliban bezingavumi ukuvumela abantu base-Afghans ukuba bahambe, kodwa baphinda bathi bonke abantu bamanye amazwe mabakhutshwe Afghanistani Nge-31 ka-Agasti kwaye banokuqhubeka nokusebenzisa i-Hamid Karzai International Airport kude kube ngumhla obekiweyo.
U-Mujahid ukwacaphule kwisiphithiphithi esikwisikhululo seenqwelomoya njengesizathu sokuba abantu base-Afghanistan basiphephe. Uthe izihlwele ezijikeleze isikhululo senqwelomoya kufuneka zibuyele emakhayeni abo, besithi ukhuseleko lwabo luya kuqinisekiswa.
Kwindibano efanayo noonondaba, u-Mujahid wabanga ukuba abantu banokuhlala e-Afghanistan kwaye wathembisa ukuba ngekhe kubekho mpindezelo. Uthe i-Taliban yayilibele ukungqubana kwixa elidlulileyo kwaye izakuthi idlule.
Uqinisekisile ukuba i-Taliban ayivumelanga ukwandisa umhla we-31 ka-Agasti obekwe yi-US ukugqiba ukukhutshwa kwabo e-Afghanistan.